Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS “ယန်ဟီးလီခရီးစဉ် မြန်မာအစိုးရသတိပေးချက် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMs. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS “ယန်ဟီးလီခရီးစဉ် မြန်မာအစိုးရသတိပေးချက်
Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS “ယန်ဟီးလီခရီးစဉ် မြန်မာအစိုးရသတိပေးချက်
“ယန်ဟီးလီခရီးစဉ် မြန်မာအစိုးရသတိပေးချက်အပေါ် အကဲခတ်တို့အမြင်”
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ – ရှေ့သီတင်းပတ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့အခါ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လက ဆုံးဖြတ် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်တွေနဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိစေဖို့ မြန်မာအစိုးရက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို ၁၁ ရက်ကြာ လာရောက် စုံစမ်းမယ့် မစ် ယန်ဟီးလီရဲ့ ခရီးစဉ်မတိုင်ခင် ခုလိုကြိုတင် သတိပေးလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တချို့ရဲ့ အမြင်တွေ ဘယ်လိုရှိပါလဲ။ မခင်ဖြူထွေးက စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS around the MAINLAND MYANMAR. Likewise, UNHCR Malaysia cares about Chins and Rohingyas first. After that other Ethnic minorities BUT miserable failed to take the Myanmar Muslim community. Actually Myanmar Muslim population of 12 million is more than total population of all the other Ethnic Minorities.
Well known Anti-Muslim Atrocities: Hate Speech, Racial-Religious Discrimination, Hate Crimes, Anti-Myanmar Muslim riots, looting, burning of Muslim houses and places of worships and mass murders by successive Myanmar Military Governments in the whole of Mainland Myanmar since 1962.
“အခုက သူက ခွင့်တော့ပေးတယ် လာခွင့်တော့ပေးတယ် သို့သော် ခုနက Fact Finding Mission နဲ့ မပတ်သက်စေရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီနှစ်ခုက သူတို့နဲ့ နွယ်နေတာပဲ။ အကုန်လုံးပဲလေ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဟိုကလည်း Human Rights ဒီကလည်း Human Rights ပဲလေ နောက်ပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ယန်ဟီးလီက သတ္တိရှိရှိနဲ့ ထောက်ခံပြီးတော့ လိုလားထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ် အခုသူက လာပြီးတော့ Fact Finding Mission နဲ့ မပတ်သက်စေရဘူးဆိုတော့ သူ့လုပ်ငန်းက နည်းနည်းလေးတော့ ကန့်သတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီဥစ္စာက ဝိနည်းလွတ် လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့လည်း ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ဟာက နည်းနည်းလေးတော့ သိမ်မွေ့တယ်ဗျ နော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကုန်ကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုတော့ မချုပ်သင့်ဘူးဗျနော်။ ကဲ ကောင်းပြီ Fact Finding Mission ကို ဗီဇာပေးဦး အဲ့တာက တပိုင်း ယန်ဟီးလီကို လာခွင့်ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ ယန်ဟီးလီကို ခုနကဟာနဲ့မပတ်သက်စေ ရဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့က လွန်သွားတယ်။ မလုပ်သင့်ဘူး ဒီဥစ္စာကို မလုပ်သင့်ဘူး အခုက ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား ရှိတဲ့အခါကျရင်တော့ လူ့အခွင့်အရေးကိုသွားပြီးတော့ ဖက်မယ် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် လူ့အခွင့်အရေးကတော့ Very Sorryပဲ။ ဆိုတော့ အဲ့လိုပုံစံမျိုးကတော့ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ကတော့ လုံးဝ မလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ ကတော့ – သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအတော်များများမှာ လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေ ဆိုးရွားလာနေတာကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေအပေါ် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာမှာကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်းလည်း ဒီကနေ့ မစ် ယန်ဟီးလီက ထုတ်ပြန် ပြောဆိုထားပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပြောမယ်ဆိုရင် ဒီတာဝန်ပေးထားတဲ့သူက တာဝန်ပေးထားတဲ့အတိုင်း တာဝန်ကျေပြွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ သူ့ကိုပေးထားတဲ့ တာဝန်ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကျန်တဲ့ဒါလေးကို ကြုံလို့လုပ်လိုက်ပါဆိုပြီး လမ်းကြုံလို့ ခိုင်းတာမျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှ မရှိဘူးခင်ဗျ။ ဒီလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတခုလုံးကနေ တာဝန်ပေးထားတဲ့ ယန်ဟီးလီက သူ့ကိုပေးထားသော အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိရဲ့ တာဝန်ကိုပဲ ထမ်းဆောင်မှာပါ။ အဲ့တော့ ကျနော်တို့ အစိုးရတွေဘက်ကလည်း နိုင်ငံတကာရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတွေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ ဒီလိုမျိုး ကန့်သတ်မှုတွေ သတိပေးမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ တခါတလေကျရင် တိုင်းပြည်ရဲ့အမြင်က သိပ်မကောင်းဘူးခင်ဗျ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်နေရသလဲ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေရလဲ ဆိုပြီးတော့ တချို့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ ဒါကို ပြန်ပြီးတော့ ပြန် ပြောတဲ့အရာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ကုလသမဂ္ဂဆိုတာ နိုင်ငံတကာက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ ခန့်အပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းပဲ လုပ်လို့ရတယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ကျော်လို့မရပါဘူး အဲ့တော့ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်လို့ရှိရင် စိုးရိမ်စရာ မရှိသင့်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။”
မြန်မာသမ္မတရုံးရဲ့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ – မစ် ယန်ဟီးလီရဲ့ခရီးစဉ်ကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လက်ခံထားပေမဲ့၊ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိစေဖို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြား ထားတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
← UN Refugee Chief visits Myanmar but he ignored the Meiktila Myanmar Muslim Refugees
တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ? လီကွမ်းယု မဟာသီယာ… တောင်ကိုရီးယား ဂျပန်က ဒုကမ္ဘာစစ်အပီး ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ လေ့လာ →
One thought on “Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS “ယန်ဟီးလီခရီးစဉ် မြန်မာအစိုးရသတိပေးချက်”
Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS ..This is the usual habit of UN, UNSC, UNGA, UNHCR although International Media, Human Rights Watch, Genocide Watch, Amnesty International, USCIRF’s Annual Reports, Fortifi Rights etc reporting the Atrocities, discriminations, restriction of religious activities and up to mass murders on MYANMAR MUSLIMS by successive Bama Buddhist Military governments and continue up to DASSK’s NLD Government.